Mainline ụgbọ mmiri okpuru mmiri sooks
Mwube & Ihe Akụrụngwa Isi ozuzu na eriri dị n'ime: Ezigbo, mmanụ na mmanụ na-eguzogide ọgwụ dị ọcha enweghị ntụpọ na Extruded Acrylontrile Butadiene Rubber (NBR); Mkpuchi Nchedo: ihe owuwu pụrụ iche iji gbochie ntụpọ ma ọ bụ mmebi nke na-adọka ma ọ bụ na-emebi emebi nke isi ihe; Ndozi: Otutu Plies nke High Tensile Textile ụdọ. Otu agbakwunyere helical Isi ígwè waya. Otu ozu na okpukpu abuo bu ihe ozo: Ezigbo oji, Siri ike Rubber na-eguzogide Abrasion, ...
Mainline Submarine sooks Na olu akwa
Mwube & Ihe Akụrụngwa Isi ozuzu na eriri dị n'ime: Ezigbo, mmanụ na mmanụ na-eguzogide ọgwụ dị ọcha na-enweghị ntụpọ na Extruded Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Mkpuchi Nchedo: ihe owuwu pụrụ iche iji gbochie ntụpọ ma ọ bụ mmebi nke na-adọka ma ọ bụ na-emebi emebi nke isi linig; Ndozi: Otutu Plies nke High Tensile Textile ụdọ. Otu agbakwunyere helical Isi ígwè waya. Single ozu na Ugboro abụọ anu Mpụta Cover: Ezigbo nwa, Sịntetik Rubber eguzogide ọgwụ na abrasion, O ...
Margbọ okpuru mmiri sooks na One End Mkwado
Mwube & Ihe Akụrụngwa Isi ozuzu na eriri dị n'ime: Ezigbo, mmanụ na mmanụ na-eguzogide ọgwụ dị ọcha na-enweghị ntụpọ na Extruded Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Mkpuchi Nchedo: ihe owuwu pụrụ iche iji gbochie ntụpọ ma ọ bụ mmebi nke na-adọka ma ọ bụ na-emebi emebi nke isi linig; Ndozi: Otutu Plies nke High Tensile Textile ụdọ. Otu agbakwunyere helical Isi ígwè waya. Otu ozu na okpukpu abuo bu ihe ozo: Ezigbo oji, Siri ike Rubber na-eguzogide Abrasion, ...
Otu Njedebe nke Ume Okpuru Mmiri Nkwanye Ike Na Mkpado
Mwube & Ihe Akụrụngwa Isi ozuzu na eriri dị n'ime: Ezigbo, mmanụ na mmanụ na-eguzogide ọgwụ dị ọcha na-enweghị ntụpọ na Extruded Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Mkpuchi Nchedo: ihe owuwu pụrụ iche iji gbochie ntụpọ ma ọ bụ mmebi nke na-adọka ma ọ bụ na-emebi emebi nke isi linig; Ndozi: Otutu Plies nke High Tensile Textile ụdọ. Otu agbakwunyere helical Isi ígwè waya. Single ozu na Ugboro abụọ anu Mpụta Cover: Ezigbo nwa, Sịntetik Rubber eguzogide ọgwụ na Abras ...
50m n'ọdụ ụgbọ mmiri sooks
Ckgbọ mmiri / ibu mmanụ sooks Ngwa n'ọdụ ụgbọ mmiri sooks Ezubere nke kacha ọrụ ndụ na mmanụ ala ngwaahịa na nụchara anụcha mmanụ nyefe na ruo 300 PSI ọrụ mgbali. Uzo a nke uzo uzo a bara uru ebe achoro nrụgide na-arụ ọrụ dị elu ma ọ bụ mgbidi dị arọ maka abrasion. Gbọ mmiri na-arụ ọrụ dị arọ na mmiri na-agbapụta mmiri ezubere iji nyefee n'etiti ndị na-eme mkpọtụ, tankị nchekwa na arịa mmiri. Hodị hoses ndị a na-etinye tube pụrụ iche iji gbochie mgbasa ozi na 50-100% aromatic conten ...
11.8m n'ọdụ ụgbọ mmiri sooks
N'ọdụ ụgbọ mmiri / Ibu mmanụ sooks n'ọdụ ụgbọ mmiri Nyefee sooks Construction: tube: Black, ezigbo, Nitrile sịntetik roba, adabara ruo 50% ọdịnaya aromatic. Mkwado: Mee ka ọrụ ike dị ukwuu na-arụ ọrụ taya na-akwado ya na waya helix, wires. Cover: Black, ọbọp imecha, sịntetik roba maka elu abrasion, ozone & ihu igwe na-eguzogide. Ezigbo Okpomọkụ: -40 ℃ na + 100 ℃ (180 ℉) Ihe nchebe: 5: 1 Dock Oil Transfer Hose E ji mara: C / W flanges wuru na otu akụkụ ofu na otu akụkụ swi ...